Na-ekele maka Tinderbox na Super Bowl! | Martech Zone
Na-ekele maka Tinderbox na Super Bowl!
Amalite America achịkọtala ihe karịrị ijeri $ 1 ijeri nkwa site n'aka ọtụtụ ndị mmekọ iji kwado uto nke mmalite na mpaghara ise dị mkpa:
Ahụmahụ: Jikọọ mmalite na ọzụzụ, ndị ndụmọdụ, ndị ndụmọdụ na ndị na - eme ihe ngwa ngwa
Ọrụ: Nye ndị na-amalite ọrụ ohere ịnweta ọrụ dị oke egwu na ọnụego belata
Amamihe: Nyere ndi n’ebido aka n’inye ndi mmadu aka, inye ha ọzụzụ ma jigide ha ndi n’eme ka ha too
Ahịa: Nyere aka site na inweta ndi ahia ohuru na igbasa na ahia ohuru
Isi obodo: Chetara anyị isi obodo maka mmalite na mpaghara na mpaghara dị iche iche
Na Super Bowl dị na Indianapolis, ihe karịrị obodo iri atọ na-agba mbọ na-anwa igosipụta site na asọmpi Super Bowl nke Startup America Partnership na-akwado Zụlite Indy, nzukọ mmepe akụ na ụba na-enyere ụlọ ọrụ mpaghara aka ịga nke ọma ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ịkwaga Indianapolis.
Ndị ahịa anyị, Tinderbox, sọftụwia dịka ọrụ amaghị software, tinye vidio ndị a dị egwu nke na-akọ akụkọ Tinderbox n'okpuru obere nkeji wee mechie nnukwu ozi gburugburu ya na ọchịchọ ha ịhọrọ!
BTW: Anyị abụghị naanị ndị ahịa nke Tinderbox, anyị bụkwa ndị ahịa nwere ezigbo ọ happyụ. Anyị bụ ndị a obere gị n'ụlọnga na-eme a ton nke amụma. Inwe ike itinye onyinye inye onyinye ma ọ bụ RFP n'ihe dị ka nkeji echebere anyị ọtụtụ awa. Nakwa, ọ fọrọ nke nta ka m nwee ịja mma maka atụmatụ anyị site na atụmanya anyị. Na… ọ bụ mgbe niile a tinyere itinye a amaghị na ma na-njikere mgbe nnata meghere ya!
Tags: azụmahịa amaghị softwaremepee indyamaghị softwareamerica bidoigbe igbe
Bufee Ozi na-emebi Ọrụ